Isku Soo Baxyo Lagu Diidanyahay Xasan Gurguurte oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb iyo Khilaaf ka taagan Shirka Cadaado.
Wednesday April 01, 2015 - 13:37:26 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusomareeb ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in halkaasi ay ka socdaan isku soo baxyo rabshado wata oo looga soo hor jeedo siyaasadda maamulka Xassan Sheekh ee ku aadan sameynta maamulka gobolada dhexe.
Isku soo baxan oo la sheegayo iney soo qaban qaabiyeen siyaasiyiin iyo hogaamiye kooxeedyo ku kacsan Gurguurte ayaa lagu soo bandhigay shicaaraad looga soo hor jeedo in shirka maamul usameynta lagu qabto magaalada Cadaado.
Goob jooge ku sugan magaalada ayaa sheegaya in dadku gubayaan taayarro iyo wax yaabo lamid ah, iyadoo dhanka kale garoonka diyaaradaha ee magaalada ay xaadir ku yihiin xubno doonaya in ay soo dhaweeyaan Xassan Sheekh.
Inta badan xubnihii ka qeyb galayay shir maalmahanba ka socday Dhuusamareeb ayaa lasoo dheegayaa in ay baxeen oo ay u kala hayaameen degaanadii ay ka yimaadeen.
Si kastaba ha ahaatee waxaan illaa iyo hadda aan la ogeyn waxa uu Xassan Sheekh kala kulmi karo magaalada Dhuusamareeb oo ay xaaladeedu kacsan tahay, inkastoo ilo dowladda xaggeeda ah ay sheegayaan in Gurguurte uu maanta si kama dambeys ah ugu dhawaaqayo halka shirka lagu qabanayo oo loo badinayo dhanka magaalada Cadaado.